शीर्षकमा बाइबल पदहरू: Доверие -> राम्रो चरित्र
Смелост / смел
Магьосник / магия
राम्रो चरित्र: [Доверие]
Ето, Бог ми е спасение; Ще уповавам, и не ще се боя; Защото Господ Иеова е моя сила и песен, И Той стана мое спасение.
 परमप्रभु, ज-जसले आफ्‍ना मनका अभिप्राय दह्रो राख्‍छन्, र तपाईंमाथि भरोसा राख्‍छन्, तिनीहरूलाई पूर्ण शान्‍ति दिनुहोस्। सधैँभरि परमप्रभुमा भरोसा राख किनभने उहाँ नै सनातनको चट्टान हुनुहुन्‍छ।
नडरा, म तँसित छु! म तेरा परमेश्‍वर हुँ, कुनै कुराले तँलाई नतर्साओस्! म तँलाई बल र मद्दत दिनेछु। मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई बचाउनेछु।
मैले तिमीहरूको निम्‍ति रचेका उपायहरू म आफैं जान्‍दछु। ती उपायहरूद्वारा तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ तर खति हुनेछैन र तिमीहरूले आशा गरेका र उज्‍वल भविष्‍य तिमीहरूलाई दिनेछु।
चोर त चोर्न, मार्न र नाश गर्नलाई मात्र आउँछ। तर मचाहिँ तिनीहरूले जीवन पाऊन् र त्‍यो प्रशस्‍त मात्रामा पाऊन् भनेर आएको हुँ।
येशूले चेलाहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू दु:ख नमान। तिमीहरूले आफ्‍नो भरोसा परमेश्‍वरमाथि राख र ममाथि पनि राख।
याद राख् कि मैले तँलाई भरोसा र साहस गर्ने आज्ञा दिएको छु। नडरा अनि हताश नहो किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्‍वर तँ जहाँ गए तापनि तँसित छु।”
मेरा परमेश्‍वरले नै तिमीहरूको खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ। ख्रीष्‍ट येशूमा भएको उहाँको असीम धन सम्‍पत्तिबाट नै तिमीहरूलाई चाहिने कुरा दिनुहुनेछ।
आफूमाथि अरूको कस्‍तो विचार छ, त्‍यसमा ध्‍यान दिइरहनु खतराजनक छ तर परमप्रभुमा भरोसा राख्‍ने मानिस सुरक्षित रहन्‍छ।
हे परमप्रभु! तपाईंलाई चिन्‍नेहरूले तपाईंमा भरोसा राख्‍छन्, तपाईंमा शरण लिनेहरूलाई तपाईंले छोड्‍नुहुन्‍न।
कोही आफ्‍नो लडाइँका रथमाथि भर पर्दछन् र कोही आफ्‍ना घोडामाथि, तर हामी परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरको शक्तिमा भर पर्दछौं।
परमप्रभुले मलाई रक्षा गर्नुहुन्‍छ र मलाई बचाउनुहुन्‍छ; म उहाँमाथि भरोसा राख्‍छु। उहाँले मलाई सहायता गर्नुहुन्‍छ र आनन्‍द दिनुहुन्‍छ, आनन्‍दका गीतले म उहाँको प्रशंसा गर्छु।
दुष्‍टले कष्‍ट भोग्‍नुपर्नेछ तर ज-जसले परमप्रभुको भरोसा गर्छन्, तिनीहरूलाई उहाँको अटुट प्रेमले रक्षा गर्दछ।
आफैंलाई परमप्रभुकहाँ सुम्‍पिदेऊ, उहाँमा भरोसा राख; उहाँले तिमीलाई सहायता गर्नुहुनेछ।
उहाँ भन्‍नुहुन्‍छ, “शान्‍त होओ र सर्वोच्‍च परमेश्‍वर म नै हुँ भनी जान। म जाति-जातिमा सारा संसारमा सबैभन्दा सर्वोच्‍च छु।”
मानिसमा भर पर्नुभन्दा परमप्रभुमा भरोसा गर्नु अझै असल हो।
हरेक बिहान मलाई तपाईंको अटुट प्रेमको याद दिलाउनुहोस् किनभने म तपाईंमाथि भरोसा राख्‍दछु। मेरो प्रार्थना तपाईंकहाँ पुग्‍दछ, मैले हिँड्‍नुपर्ने बाटो मलाई देखाइदिनुहोस्।
परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने अनि उहाँले आफ्‍नो इच्‍छा पूरा गर्न छान्‍नुभएका प्रत्‍येक मानिसको निम्‍ति हरेक घटनाले उसको भलाइ नै गर्छ।
आशा दिने परमेश्‍वरमा तिमीहरूले विश्‍वास राखेका छौ। उहाँले नै तिमीहरूलाई आनन्‍द र शान्‍तिले भरिदेऊन्। त्‍यसै गरी पवित्र आत्‍माको शक्तिले तिमीहरूको आशा बढ्दै-बढ्दै जाओस्।
 हे सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु! मलाई डर लाग्‍दा म तपाईंमा भरोसा राख्‍छु। म परमेश्‍वरमा भरोसा राख्‍दछु र डराउँदिनँ, उहाँले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको लागि म उहाँको प्रशंसा गर्छु, तुच्‍छ मानिसले मलाई के गर्न सक्‍छ र?
 मेरा उद्धार र सम्‍मानको लागि म परमेश्‍वरमा भर पर्दछु, उहाँ मेरो सामर्थी रक्षक हुनुहुन्‍छ, उहाँ मेरो आश्रय हुनुहुन्‍छ। हे मेरा मानिसहरू हो! सधैँ परमेश्‍वरमा भरोसा गर, उहाँलाई आफ्‍ना सबै दु:ख-कष्‍ट भन किनभने उहाँ हाम्रा शरणस्‍थान हुनुहुन्‍छ।
 ज-जसले सुरक्षा पाउन परमप्रभुको शरण लिन्‍छन् र सर्वशक्तिमान्‌को सुरक्षामुनि बस्‍छन्, तिनीहरूले उहाँलाई भन्‍न सक्‍छन्, “मलाई बचाउने र रक्षा गर्ने तपाईं हुनुहुन्‍छ, तपाईं मेरो परमेश्‍वर हुनुहुन्‍छ, म तपाईंमा भरोसा राख्‍दछु।”
 असल मानिस कहिल्‍यै असफल हुन्‍न, उसलाई सधैँभरि मानिसहरूले याद गर्छन्। दुष्‍ट समाचार पाएर ऊ हड्बडाउँदैन, उसको विश्‍वास दरिलो छ र उसले परमप्रभुमाथि भरोसा राख्‍दछ।
१ यूहन्ना 5:14-15
 परमेश्‍वरको इच्‍छाअनुसार केही कुरा हामीले माग्‍दा उहाँले सुन्‍नुहुन्‍छ भनेर नै उहाँका अगाडि जाने आँट गर्छौं। हामीले जहिले मागे पनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्‍नुहुन्‍छ। यो सत्‍य हो भनी जानेको हुनाले हामीले यो पनि जान्‍दछौं कि उहाँसित मागेका कुरा हामी पाउँछौं।
 परमेश्‍वर हाम्रा शरणस्‍थान र बल हुनुहुन्‍छ, सङ्कष्‍टको समयमा सहायता गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्‍छ। यसकारण हामी डराउनेछैनौं: चाहे पृथ्‍वी थर्कोस् र पर्वतहरू महासागरमा खसून्।
 तेरो सारा हृदयले परमप्रभुमा भरोसा गर्‌, म जान्‍दछु भन्‍ने तेरो विचारमा निर्भर नहो। आफ्‍ना सबै काममा परमप्रभुलाई सम्‍झी र उहाँले तँलाई ठीक मार्ग देखाएइदिनुहुनेछ।
 “त्‍यसैकारण म तिमीहरूलाई भन्‍छु, जीविका चलाउन चाहिने खाने-पिउने, लाउने कुराको बारेमा चिन्‍ता नगर। के खाने कुराभन्दा जीवन ठूलो र लाउने कुराभन्दा शरीर ठूलो होइन र? आकाशमा उड्‍ने चराहरूलाई हेर, खै तिनीहरू खेती गर्दैनन्, बाली काट्‍ने, थन्‍क्‍याउने पनि गर्दैनन्। तैपनि स्‍वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका परमेश्‍वर पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्‍छ। ती चरा-चुरुङ्गीहरूभन्दा त तिमीहरू धेरै नै मूल्‍यवान् छौ, होइन र?
 “तर त्‍यो मानिस धन्‍य हो, जसले ममाथि भरोसा राख्‍दछ। त्‍यो खोलाको छेउमा उम्रेको रूखजस्‍तो हो, जसको जरा पानीसम्‍म फिंजिएको हुन्‍छ। गर्मीका दिनमा त्‍यसलाई डर हुँदैन किनभने त्‍यसका पातहरू सधैँभरि हरिया रहन्‍छन्। खडेरी पर्दा पनि त्‍यसलाई केही चिन्‍ता हुँदैन किनभने त्‍यसले आफ्‍ना फल दिइरहन्‍छ।
 यहोशू, तेरो जीवनकालमा कसैले पनि तँलाई हराउन सक्‍नेछैन। मोशासित झैँ म तँसित रहनेछु। म सधैँ तँसित रहनेछु, म तँलाई कहिल्‍यै त्‍याग्‍नेछैनँ। भरोसा राख् र साहस गर्‌ किनभने यी मानिसहरूले मैले तिनका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको देश अधीन गर्दा तैँले तिनीहरूका अगुवाइ गर्नेछस्। केवल भरोसा राख् र साहस गर्‌ अनि मेरा सेवक मोशाले दिएका नियमहरू सबै पालन गर्ने निश्‍चय गर्‌। त्‍यसको कुनै भाग नछोड्‍नू र तँ जहाँ जान्‍छस्, त्‍यहाँ सफल हुनेछस्। व्‍यवस्‍थाको पुस्‍तक सधैँ पढ्‍ने गर्‌। रात-दिन त्‍यसमा ध्‍यान गर्‌ र त्‍यहाँ लेखिएका हरकुरा पालन गर्‌। तब तिमीहरूको फलिफाप हुनेछ र तिमीहरू सफल हुनेछौ। याद राख् कि मैले तँलाई भरोसा र साहस गर्ने आज्ञा दिएको छु। नडरा अनि हताश नहो किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्‍वर तँ जहाँ गए तापनि तँसित छु।”